6 အနုညာတစီရင် Institution များဝင်း 18 ၏ 19 တစ်ခုမှာ UDRP အတွက်အနုညာတစီရင်ဒိုမိန်း
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် /6အနုညာတစီရင် Institution များဝင်း 18 ၏ 19 တစ်ခုမှာ UDRP အတွက်အနုညာတစီရင်ဒိုမိန်း
25/06/2013 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ခြောက်လအနုညာတစီရင် Panel များတစ်ဦးယူဆောင် တစ်ခုတည်း UDRP ရှာကြံ 19 အားလုံး ICSID ရှေ့နေများကပိုင်ဆိုင်ဒိုမိန်းအမည်များ, LLC နှင့်စုပေါင်းအနိုင်ရ 18 အဆိုပါဒိုမိန်းများအတွက်.
တိုင်ကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်၏လန်ဒန်တရားရုံးများမှာ (LCIA) လန်ဒန်, ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်၏ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ("ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း"); စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ICC က) ပဲရစ်၏, ပြင်သစ်; စင်္ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ (SIAC) စင်္ကာပူ၏; စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစတော့ဟုမ်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင် Institute က (SCC) စတော့ဟုမ်း၏, ဆွီဒင်; အငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အမေရိကန်အနုညာတစီရင်အစည်းအရုံး / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးစင်တာ (AAA / ICDR) အမိန့်သစ် York.The panel က၏ 18 ၏ 19 ကြောင်းရှာဖွေတာလွှဲပြောင်းခံရဖို့ domains များ:"" ဖြေဆိုသူမဆိုလမ်းထဲမှာညည်းညူနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ. ဒါဟာဒိုမိန်းအမည်များမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့တိုင်ကြားမဆိုအားဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသေးသို့မဟုတ် Marks '' တိုင်ကြားဆင်တူ Marks သို့မဟုတ်မည်သည့်အမှတ်အသားများ '' တိုင်ကြားထည့်သွင်းမဆိုဒိုမိန်းနာမည်များမှတ်ပုံတင်ရေးရှာ. ယင်းကိုတုံ့ပြန်လေ့အဆိုပါဒိုမိန်းအမည်များသို့မဟုတ်မည်သည့်အလားတူနာမည်ဖြင့်လူသိများကြောင်းမျှသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်. အဲဒီအစားဖြေဆိုသူ ICSID ရှေ့နေများအဖြစ်လူသိများသည်. ဖြေဆိုသူကဖြေဆိုသူအသုံးပြုနေသည်နှင့်ဒိုမိန်းအမည်များကိုအသုံးပြုထားပြီးပုံတရားဝင်ရယူထားရတာ use.Rather နှင့် ဆက်စပ်. အတွက် Domain Name ကိုအသုံးပြုရန်သရုပ်ဖော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီမသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်, တိုင်ကြား၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ, ဖြေဆိုသူရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ redirect. ဖြေဆိုသူရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြေဆိုသူကို advertise, အဘယ်သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများနှင့် ဆက်စပ်. ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ရန် purports. သော့ချက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီအသုံးပြုမှုပမာဏတစ် bona ကုန်စည် fide ရာပူဇော်သက္ကာသို့မဟုတ် services.The ဖြေဆိုသူများအတွက်ဒိုမိန်းအမည်များ၏သုံးစွဲဖို့ကတိုင်ကြား '' ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြား၏အသီးအသီးမှာ client များကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ခုံသမာဓိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုကိုတရားမျှတကြောင်းတင်ပြခြင်းရှိမရှိဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတိုင်ကြားတစ်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူး. ထို့အပွငျ, ယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတိုင်ကြားအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးအဖြစ် services.The Panel ကိုကဒိုမိန်းအမည်များတစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါအဖြစ်ဒိုမိန်းအမည်များ၏ဖြေဆိုသူရဲ့အသုံးပြုမှုကဒိုမိန်းအမည်များအတွက်အခွင့်အရေးများကိုမပေးပါဘူးတွေ့ '' ခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားသူတို့ကညည်းညူအပေါ်ဧည့်သည်များပညာပေး '' ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများတစ်စစျမှနျသောပူဇော်သက္ကာနှင့်တကွဆက်သွယ်မှုအတွက်ဒိုမိန်းအမည်များမှသက်ဆိုင်ရာဘွဲ့နာမ. ပထမဦးစွာ, ဖြေဆိုသူ ICSID ရှေ့နေများအားဖြင့်ဝင်. ဒါဟာမဆို services.The သော့ချက်ပြဿနာကိုဆက်ကပ်ဖို့ဒိုမိန်းအမည်များရန်အဘို့အသက်ဆိုင်ရာအမည်အသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါကြောင်းဖြေဆိုသူအချို့လမ်းများတွင်တိုင်ကြားဆက်စပ်ကြောင်းန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမျှသာတကယ်တော့ကဒိုမိန်းအမည်မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်လုံလောက်သောရှိမရှိဖြစ်ပါသည် တူညီဒါမှမဟုတ်ညည်းညူ Marks မှ confusingly အလားတူ. ဖြေဆိုသူကတိုင်ကြားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် Customer များအတွက်န်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကဒိုမိန်းအမည်များအတွက်အခွင့်အရေးများရှိကြောင်းစောဒကတက်သည်. လေးစားစွာဖြင့်, ဒီ Panel ကိုဖွင့်အမြင်ထဲမှာ, ဒီမှန်ကန်သောမဖြစ်နိုင်ပါ။ "”အဆိုပါ Panel ကိုသောဒိုမိန်းအမည်များအမိန့်ထုတ်:Lciamiacarbitration.com
အဆိုပါ Panel ကိုသောဒိုမိန်းအမည်များအမိန့်ထုတ်:
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်းပြောင်းရွှေ့ခံရ (ICC က).
အငြင်းပွားမှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အမေရိကန်အနုညာတစီရင်အစည်းအရုံး / အင်တာနေရှင်နယ်စင်တာကိုပြောင်းရွှေ့ခံရ (AAA / ICDR).
အဆိုပါ Website ရဲ့ Domain Name stockholmarbitration.com ဒိုမိန်းကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူကျန်ရစ်ခံရဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, ပြင်သစ်အနုညာတစီရင်, ICC ကအနုညာတစီရင်, ICDR အနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, အိုင်ယာလန်အနုညာတစီရင်, LCIA အနုညာတစီရင်, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, ပဲရစ်အနုညာတစီရင်, SCC အနုညာတစီရင်, SIAC အနုညာတစီရင်, စင်္ကာပူအနုညာတစီရင်, ဆွီဒင်အနုညာတစီရင်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, WIPO အနုညာတစီရင်